Soomaali ka badbaaday Masjid lagu dhex gubay Swedan: Video - iftineducation.com
iftineducation.com – Kooxo cunsuriyiin ah ayaa dab qabad siiyay Masjid ay ku tukudaan Soomaalida ku nool Esklistuna ee dalka Swedan, waxaana dabkaasi uu sababay dhaawac soo gaaray Shan ka mid ah Jameecada Masjidka iyo burburka Masaajidka.
Xiligii dabka la qabad siinayay Masjidka ayaa waxaa ay jameecada ku jireen Salaada, hase ahaatee qof arkayay markii dabka uu kacay ayaa gudaha masjidka orod ku galay isagoo ku qeylinayay dab ayaa kacay, Jameecaddiina mar kaliya ayey orod ugu soo baxeen Masaajidka xili ay ku jireen rakcadii u danbeysay.
Shanta qof ee dhaawacantay ayaa mid ka mid ah dhaawaciisa culus yahay.
Booliska waxay sheegeen in si ula kac ah loo gubay Masjidka, isla markaana goob jooge ayaa Booliska u sheegay in uu arkay qof dab ku tuuray Masjidka, kadibna cararay.masjid-la gubay
Masaajidada Muslimiinta Swedan ayaa noqday bartilmaameed, iyadoo aysan aheydn markii ugu horeysay ee la gubo Masaajid.
Daawo VIDEO:- Wariye Daroogo la gubayay ku marqaamey kadibna Qosol ku waashay
Hawayneey ka sheekaysay sababta ay uga carartay ninkeeda inuu ahaa nin aan loo adkaysan karin